Sawirro: Maxamed Faarax oo 10,000 mitir ee cayaaraha Olombikada Rio ku guulaystay inkastoo uu mar kufay
arlaadi August 14, 2016 No Comments
Oradyahanka Maxamed Faarax oo kasoo jeeda dalka Soomaaliya balse haysta dhalashada dalka Ingiriiska ayaa xalay taariikh ka dhigay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil oo sanadkaan martigelinayso cayaaraha Olombikada caalamka.
Maxamed Faarax ayaa ku guulaystay oradka 10,000 m tobanka kun ee mitir markii sadexaad isaga oo intii uu ordayay mar dhulka ku dhacay balse durba inta soo kacay horay kasii watay orodkiisii.
” Markaan dhulka ku dhacay waxaan ku fikerayay isku day inaad kacdo, ha argagixin, kadibna waan kacay waxaana isku dayay innaan sii ordo” ayuu yiri oradyahanka Mo Farah/Maxamed Faarax oo durba ka hor maryay oradyahanadii la tartamayay ee isaga dhaafay markii uu dhulka ku dhacay.
Oradyahanka reer Kenya ee Paul Tanui ayaa ka hormarayay markii uu dhacay Mo Farah balse markii dambe waa uu dhaafay sidii ayuuna Paul Tanui ku galay kaalinta 2aad halka oradyahanka Tamirat Tola ee dalka Itoobiyana galay kaalinta sadexaad.
Oradyahanada reer Kenya iyo Itoobiya ayaa ku haminayay inay Maxamed Faarax ka badin doonaan balse oradyahankaan ayaa ah mid inta badan ka adkeysi badan oradyahanada badankood.
Mo Farah ayaa ku orday wakhti ah 27:05.17, Paul Tinui 27:05.64 Tamirat Tola 27:06.26.